Wararka Maanta: Jimco, Feb 14, 2020-Dab baabiiyey dhul ka badan 3Km. Bariga magaalada Laascaanood
Jimco, Feberaayo,14, 2020 (HOL)-Duhurnimadii maanta ayaa lagu warhelay qayladhaan ay dad soo maray dooxada Ooda-gooye oo dacalka bari ku haysa magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool taas oo sheegayey gubashada dooxadaasi.
Dabkan oo ahaa mid xawli ku socdey ayaa waxaa ku dareeray dhilnyarada magaalada oo ay gaadiidleydu u gurayeen meesha dabku ka kacay.
Sidoo kale gaadhi ay wateen ciidanka dabsamiska ayaa isna halkaasi qayb xoogleh ja qaatay walow uu dabku balaadhnaa hadana waxaa lagu guulaystey in la hakiyo.
Dabkan ayaa markale ka bilaabmay dooxada fiidkii caawa waxaana loo aanaynayaa in dhul aan si fiican u damin ay dabayshu dib u holcisey sida uu noo sheegay Maxamuud Xassan oo halkaa goor dhoweyd ku sugnaa.
Inkasta oo haatan la sheegayo inuu daciifay waxaa weli si hagar la'aan ah u shaqaynay dhaliyarada magaalada oo adeegsanaya gacmahooda iyo ciida waxaase walaac laga qabaa hadii hawshani joogsato dabkuna dib u bilaabmo habeenimada kaasi oo galaafan kara dhul aad u balaadhan oo daaqsimeed ah.
Ma jirto qasaare nafeed iyadoo reero badan dhulkaas yaaleen waa laga caymiyey walow aan la hubin mid agab.